I-5-HTP: Ngabe usakhungathekile ngenxa yokuqwasha? -I-Carey Hunan Sunlight Bio-Tech Co, Ltd
I-5-HTP: Ngabe usakhungathekile ngenxa yokuqwasha?
Njengamanje, iningi lama-amino acid litholakale linomsebenzi wezinto eziphilayo, phakathi kwalo lapho i-tryptophan kuma-amino acid elimnandi libaluleke kakhulu. I-Tryptophan ingenye yama-amino acid abalulekile womzimba womuntu, i-5-HTP yakhiwa yi-tryptophan catalyzed yi-tryptophan hydroxylase emzimbeni futhi umuthi obalulekile wezinzwa. Njengamanje, i-melatonin, ubuchopho begolide, njll. Emakethe kuguqulwa kusuka ku-5-HTP.
Ukusebenza kahle kwe-5-HTP
I-1) I-5-HTP inomphumela othile we-antidepressant Maes ukubheka ukutholakala kwe-TRP (tryptophan) ezigulini ezinokudangala futhi kuhlolwe iziguli ezingama-26 ngokuxineka kwezinga lokusetshenziswa kwe-L-TRP ngaphambi nangemva kokulashwa nge-1mg dexamethasone kanye nokugcinwa komchamo we-24h. Umphumela uthole ukuthi Ukusetshenziswa kwe-L - TRP ezigulini ezinokucindezelwa okukhulu kwakuphansi kakhulu kunalezo ezigulini ezinokudangala komoya omncane.
I-2) I-5-HTP inomphumela ophakathi we-analgesic Okunye ukuhlola kukhombise ukuthi ukuthatha i-TRP, amagundane asesimweni sokuxineka kukhule kakhulu okuqukethwe kwe-5 - HT ku-medulla, amakhandlela, ama-striatum, njll, kanye ne-5 - HT metabolism kwezinye izifunda zobuchopho. Lapho imicu ye-5 - HT eyehlela ebuchosheni ifinyelela umgogodla, ingagxivizwa ngama-interneurons ukuze isebenze ama-neurep ye-chapephalin esifundeni se-keratin. Lokhu kokugcina kungavimbela ukudluliselwa kolwazi lobuhlungu bekhompiyutha kuya ezingeni lesibili lisebenzisa isithiyo sangaphambi kobuchopho. I-Neurons, ngaleyo ndlela idlala umphumela ophakathi we-analgesic. Ochwepheshe babuye baqinisekisa ukuthi i-TRP ingakhuphula kakhulu umphumela we-analgesic we-clofibrate. Le miphumela iphakamisa ukuthi i-TRP ingakhipha i-analgesia ephakathi ngokwandisa okuqukethwe kwe-5-HT ohlelweni lwezinzwa oluphakathi.
3) Umsebenzi we-5-HTP ohlelweni lwenhliziyo Kubonakaliswa ikakhulukazi ngomphumela womfutho wegazi. Imiphumela yocwaningo kumamodeli wezilwane ahlukahlukene we-hypertension kumagundane akhombisa ukuthi i-TRP nayo inomsebenzi we-antihypertensive. Izinguquko zokucindezela kwegazi le-Systolic zabonwa kumagundane anomfutho wegazi ojwayelekile, umfutho wegazi ovundlile, umfutho wegazi we-DOC eziyishumi, kanye neqembu le-Grollman hypertension neKetone analogs indole pyruvate (IPA) ye-TRP. Ngemuva kwezinsuku eziyi-10 zilandelana, umfutho wegazi we-systolic weqembu elinomfutho wegazi wawungaphansi kakhulu kunalowo weqembu elijwayelekile lomfutho wegazi. Ngaphandle kwalokho, ukuphathwa okuqhubekayo kwe-TRP nakho kungavimba ingxenye ethile yokuthuthuka kwegazi okuzenzakalelayo kumagundane.
I-4） 5-HTP ibuye ibe nethonya le-hypnotic I-5 - i-HTP ingakhiqiza i-serotonin okuyinto eyandulela ama-neurohormones ngamavithamini B6 emzimbeni, ngaleyo ndlela ikhuthaze ukulala nokuqina kwengqondo. UGneiss et al. uqaphele ukuthi i-L-TRP ifinyeze i-latency yokulala futhi yenyusa isilinganiso se-REM / NREM. Olunye ucwaningo luveze ukuthi i-L-TRP isebenza kakhulu kubantu abanobunzima bokulala nezinkinga zobuthongo obunzima. Lo mphumela uhlobene nokukhulisa okuqukethwe kwe-5 - HT ebuchosheni.
I-5) I-5-HTP inomphumela wokulwa nokuxineka ngokomzimba Ukucwaninga kutholile ukuthi ukujova kwe-5-HTP kunganciphisa ukuhlaselwa nokubulawa kwezimpisi esikhathini esifushane, izinga lokuncishiswa lilingana nevolumu yokujova ye-5-HTP.
6) Umphumela we-5-HTP emsebenzini we-neuroendocrine emzimbeni uyinkimbinkimbi Ingaguqulwa ibe ngama-hormone athile abandakanyeka ngokuqondile emisebenzini ye-endocrine, futhi futhi ingaguqulwa ibe yi-central neurotransmitter 5-HTP ethinta ngokuqondile ukukhishwa kwama-neurohormones. I-melatonin ehlelwe yi-pineal gland ingumkhiqizo wokuguqulwa we-5-HTP. IMelatonin ingavimba imfihlo ye-LH ye-FSH, okuholela ochungechungeni lwemisebenzi ye-endocrine yokuzala.
I-7) I-5-HTP futhi ivimbela ukudla ngamanani okweqisa Umthamo we-3 kuya ku-200 mg · kg -1 kwe-5 -HTP ungadala i-anorexia kumagundane ngokuhambelana okuqondile komthamo.
8) Futhi, ocwaningweni lwamakhemikhali wezilwane, kutholakale ukuthi i-5-HTP ingadala ukwanda kwe-ejaculation latency kumasogwaja wesilisa futhi ikhuphule izinga lokuthokozela kwezocansi.
I-5-HTP isetshenziswa kabanzi kwizithako zokudla (imikhiqizo yezempilo) nezidakamizwa, Uma udinga ukwazi okwengeziwe, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Okwedlule: Uyazi owandulelayo weGriffonia Imbewu?
Okulandelayo: Ungawukhipha kanjani ama-polysaccharides eGanoderma Lucidum?